SmCo သံလိုက် - တရုတ် Ningbo Sine
Sintered Nd သည်သံလိုက်
ကပ်လျက်တည်ရှိ Nd သည်သံလိုက်
သံလိုက် Filter ကို
သံလိုက် Filter ကိုပစ္စည်း
ရေစိုခံသံလိုက် Button လေး
သံလိုက် Applications ကို
မော်တော် / Generator ကိုသံလိုက်
sensors / switch သံလိုက်
ကပ်လျက်တည်ရှိ Nd သည်
သံလိုက် Filter ကိုဘား
မော်တော် Generator ကိုသံလိုက်
SmCo သံလိုက်, ရှားပါးမြေကြီးတပြင်အမြဲတမ်းသံလိုက်၏ဒုတိယမျိုးဆက်များမှာ SM, Co. , Fe နှင့်အခြားသဲလွန်စသတ္တုဒြပ်စင်ကနေဖန်ဆင်းတော်တစ်ဦးက high-စွမ်းရည်အမြဲတမ်းသံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ 300 ℃တစ် max ကိုအလုပ်လုပ်အပူချိန်အပြင်ကချေးနဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ထူးခြားတဲ့ခုခံရှိပါတယ်။ ဒါကွောငျ့ကအခြားသူတွေ aomng ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာအာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောပုံစံမျိုးစုံအတွက် SmCo5 နှင့် Sm2Co17 သံလိုက်ထုတ်လုပ်တယ်။ အတော်များများက clients များအဆင့် YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, etc စက်သည်းခံစိတ်ကျနော်တို့လိုအပ် ...
SmCo သံလိုက် ရှားပါးမြေကြီးတပြင်ဒုတိယမျိုးဆက်များမှာ သံလိုက် , SM, Co. , Fe နှင့်အခြားသဲလွန်စသတ္တုဒြပ်စင်ကနေဖန်ဆင်းတော်တစ်ဦးက high-စွမ်းရည်အမြဲတမ်းသံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ 300 ℃တစ် max ကိုအလုပ်လုပ်အပူချိန်အပြင်ကချေးနဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ထူးခြားတဲ့ခုခံရှိပါတယ်။ ဒါကွောငျ့ကအခြားသူတွေ aomng ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာအာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထုတ်လုပ် SmCo5 နှင့် Sm2Co17 အမျိုးမျိုးသောပုံစံမျိုးစုံအတွက်သံလိုက်။ အတော်များများက clients များအဆင့်စသည်တို့ကို YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32 လိုအပ်
ကျနော်တို့ဖြတ်တောက်သို့မဟုတ်စူပါပွန်းစားခြင်းနှင့်အတူကြိတ်ခြင်းဖြင့်ရှုထောင်အရွယ်အစားနှင့်သည်းခံစိတ်အောင်မြင်ရန်။ Sm သည်ကိုဘော့ (SmCo) သမားရိုးကျတူးဖော်ခြင်း, လှည်သို့မဟုတ်ကြိတ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူမြေမရနိုင်, သူတို့ဂုဏျသတ်တိမြားခင်မြင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကြီးမားသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးအသင်းတော်များများသောအားဖြင့်ကြိုတင်ပရိသတ်တို့အားဂုဏျသတ်တိမြားနေကြသည်။ Sm သည်ကိုဘော့သံလိုက်များအတွက်စံသည်းခံစိတ် +/- ဖြစ်ကြသည်။ 005 "မြေပြင်အတိုင်းအတာအဘို့။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်အဆင့်အမျိုးမျိုးအတွက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, လက်စွပ်နှင့် disc ကို form မှာ SmCo သံလိုက် stocks, ကြှနျုပျတို့အပြည့်အဝငျသညျမလိုအပ်သောအရွယ်အစားနှင့်သည်းခံစိတ်ထုတ်လုပ်ရန်တပ်ဆင်ထားကြသည်။
1:5အလွိုင်းပစ္စည်း
1:522 MGOe 16 MGOe (စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်) ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% ဆမ္နှင့် 50% ကိုဘော့၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 1:5စီးရီး 250 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဦးရေအများဆုံးအကြံပြုလည်ပတ်မှုအပူချိန်ရှိပါတယ်။ SmCo 1:5သံလိုက် magnetize မှ 2:17 ပစ္စည်းများထက်နိမ့်သောလယ်အားသာချက်လိုအပ်သည်။ အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင် 1:15 ပစ္စည်းတစ်ခုသံလိုက်ကရိယာရရှိနိုင်ကြောင်းပေး, မျိုးစုံထမ်းဘိုးနှင့်အတူဂုဏျသတ်တိမြားနိုင်ပါသည်။
2:17 32 MGOe 24 MGOe ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ကျန်ရှိသောဘော့ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအကြောင်းကို 25% ဆမ္, 5% ကြေးနီ, 18% သံ, 2% ဟက်ဖ်နီယမ်သို့မဟုတ်ဇာကွန်နီယမ်၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၏ 2:17 စီးရီး 350 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဦးရေအများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်ရှိပါတယ်။ 2:17 အထူးအဆင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ပင်မှ operate နိုင်သည့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ SmCo 2:17 အလွန်မြင့်မားသောသံလိုက်စက်ကွင်းလိုအပ်တယ်, မျိုးစုံဝင်ရိုးစွန်းသံလိုက်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပွင့်လင်း and download SmCo သံလိုက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာများ
SmCo သံလိုက် VS Sintered Nd သည်သံလိုက်
အများဆုံးအလုပ်လုပ်အပူချိန်: 250-350 ° C မှ
အများဆုံးစွမ်းအင်ကုန်ပစ္စည်း: (Bhmax) (15-35 MGOe)
အများဆုံးအလုပ်အဖွဲ့အပူချိန်: (Temp.Tw) 250-350
induction Coercive အင်အားစု: (HCB) 4-12 (Koe )
အကြွင်းအကျန်သံလိုက်: Br 0.8-1.2 (T) ကို
ကျန်နေတဲ့သံလိုက်၏ပြောင်းပြန်အပူချိန်ကိန်း (Br) -0.04 - -0,01
1. Excellent က Coercity
2. Nice အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု
ကြောင့်ဘော့၏စျေးနှုန်း sensitivity ကိုမှ၎င်း၏စျေးနှုန်းစျေးကြီးများနှင့်သာအတက်အကျရန်လွယ်ကူ 3. ဖြစ်ပါသည်
Powder ဖြစ်စဉ်ကို→ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း→ Sintering →သံလိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုစမ်းသပ်→ဖြတ်တောက်ခြင်း→ချောထုတ်ကုန်
Sm သည်ကိုဘော့ပစ္စည်းများလေ့လိုအပ်သောအရာ, စိန်ကြိတ်ဘီးနှင့်စိုစွတ်သောဒဏ်ငွေကြိတ်အတူကို un-ဂုဏျသတ်တိမြားအခြေအနေများအောက်တွင်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ သောကြောင့်အနိမ့်စက်နှိုးအပူချိန်၏, ဆမ္ဘော့လုံးဝခြောက်သွေ့မဖြစ်ရပါမည်။ ထုတ်လုပ်မှုရုံသေးငယ်တဲ့မီးပွားသို့မဟုတ်ငြိမ်လျှပ်စစ်မီးအလွယ်တကူထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်သောအလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်, အတူနေတဲ့မီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
Sm သည်ကိုဘော့သံလိုက်ကြွပ်ဆတ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကြင်နာစွာသင်၏မျက်စိ, လက်ချောင်းများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါ။
: SmCo သံလိုက်နှင့် Sintered NdFeB သံလိုက်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုသည်အဓိကအားဖြင့်အောက်ပါအချက်များပါဝင်သည်
Nd သည်အမြဲတမ်းသံလိုက် သံလိုက်အင်အားအတွက် SmCo သံလိုက်ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်။
SmCo ပစ္စည်းများ၏ (BH) မက်စ် 32MGOe နေစဉ် sintered NdFeB ၏ (BH) မက်စ်, 53MGOe အထိဖြစ်ပါတယ်။
SmCo ပစ္စည်း NdFeb ပစ္စည်းထက် demagnetization တွန်းလှန်ရာမှာအစွမ်းရှိ၏။
NdFeB မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ခုခံအတွက် SmCo အဖြစ်ထက်သာလွန်သည်မဟုတ်။ NdFeB အများဆုံးအလုပ်လုပ်အပူချိန် 200 ℃သည်နှင့် SmCo ၏ 350 ℃အထိဖြစ်ပါတယ်။
NdFeB သံလိုက်ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်ချေးတွန်းလှန်အတွက်ဒါကောင်းသောမရှိကြပေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့များတွင်လည်းကောင်းသို့မဟုတ်ပင်လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးဖြင့်ကာကွယ်ထားခံရဖို့ရှိသည်။ အပေါ်ယံပိုင်း၏ဘုံအမျိုးအစားများကိုဇင့်, နီကယ်, epoxy နှင့်အခြားသူများပါဝင်သည်။ SmCo သံလိုက်များတွင်လည်းကောင်းမပါဘဲ rusting မည်မဟုတ်ပါ။
4. Shape, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်တပ်ဆင်
NdFeb နှင့် SmCo နှစ်ဦးစလုံးပျက်စီးလွယ်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သူတို့ကသာမန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ကထုတ်လုပ်မရနိုင်ပါ။
အထွေထွေအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းဝါယာကြိုး-လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စိန်ဘီးဖြတ်တောက်ခြင်းသည်။ ဒီတော့ဒီသံလိုက်၏ထုတ်လုပ်သူပုံစံမျိုးစုံကန့်သတ်ထားပါသည်။ အရမ်းရှုပ်ထွေးပုံစံမျိုးစုံလုပ်ကိုင်နိုင်သောမရှိကြပေ။ အတော်လေးစကားပြော, SmCo ပစ္စည်းကိုပိုမိုပျက်စီးလွယ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာကိုချိုးဖျက်သည်။ ထို့ကြောင့်, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် SmCo သံလိုက်သုံးပြီးအတွက်အလွန်သတိထားပါပေးပါ။
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်, SmCo သံလိုက်၏စျေးနှုန်းနှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ် ပို. ပင် NdFeB သံလိုက်၏ထက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် NdFeB ၏စျေးနှုန်းကြောင့်ရှားပါးမြေကြီးတပြင်သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်နိုင်ငံရဲ့တင်းကျပ်အစီအမံဖို့ကိုအလွန်ထမြောက်တော်မူပြီ။ အခြေခံအားဖြင့်ဘုံ NdFeB သံလိုက်ဆမ္ဘော့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြသည်။
ယခင်: AlNiCo သံလိုက်
နောက်တစ်ခု: Sintered Nd သည်သံလိုက်
Ningbo Sine သံလိုက် Co. , Ltd မှ။
ဖုန်းနံပါတ်: +86 574 82809158
E-mail ကို: sales@sinemagnetic.com
ဖက်စ်: +86 574 82809159